Jaalalli Kennuu Malee Fudhachuu Akka hin Taane na Barsiiftee - Xalayaa Jaalalaa
Osoo Si Dhabaatti beekee….
Eessaa jalqabu? Lafan qabee jalqabu natti himi. Akkas ta’e hamma waan hin qabne keessan jira. Guyyaa saafaa aduun qiinqanii gadi roobsu kana keessa qaamatu natti dhaamota. Ifa aduu namni dibaabeen deemu kanatu hurrii natti fakkaateen ajaa’ibsiifadhee samii samii keessa ilaala.
Anii fi ati iddoo quufa, sirba ykn lafatti namni hojii badaa hojjetutti wal agarre miti. Lafa namni itti beekumsa, ogummaa argatu Mana barumsaa keessatti ture. Nan yaadadha guyyaa Jimaataa dhuma torbee irra mana barumsaa bultii itti barannuu eeyyama mooraadhaa ittiin baanu barreessisuuf toora osoo qabannee jirruu dhuftee osoo hin beekne miila koorra kopheen ejjette.
Animmoo torban sana keessa miilli koo bitaa kubbaa osoon taphadhuu na meelatee jirbiin xaxamee kophee godhachuu waan hin dandeenyeef kophee leexaan deemaan ture. Atimmoo dhuftee narra ejjettee waan sammuu keessaa namatti dhaga’amu dhukkubbii mi’aa addaa qabu tokko na keessatti uumte. Dafqi adda koorra gadi yaa’e gaafa ati gadi jettee miila koo naaf sukkuumtu rifeensa mataa kee ”Okaa Jabbii Arfaasaa” fakkaatu keessatti gadi roobe.
Sun hunduu homaa sitti hin fakkaanne. Rifeensa kee dogoggorteellee harkaan hin tuqne. Sababa taatee sanaan anaa fi siif dursi kennamee waraqaan bahumsaa nuuf laatamee haga meeshaa koo hiriyyoonni koo kutaa jireenya warra dhiiraatii naa fidanitti dhagaa tokkorra na keessee kan kee fiduuf fiigichaan qajeelte.
Dhugaa dubbachuuf lafatu waliin na mare. Qilleensatu foolii jijjiiree funyaanirraa natti urgaa’e. Waliisaan wallaale. Maaltu ta’uuf deemaa? Maaltu natti ergee? Waggaa kana guutuu as keessatti osoo hin argiin akkamittan jiraadhen ofiin jechaa ture.
Osoon galaana yaadaa kana keessa jiruu gidduun dhuftee ”Ka’i haa deemnu ” naan jette. Meeshaan koo meerre siin jennaan ”Ijoolleen balbala irra geessaniiru” naan jette. Anis gatiittii keetti rarra’een ”Shekelfachaa” si faana qajeele. Urgaan morma kee jalaa urgaa daraaraa birraa caala. Ajaa’ibaam.
Egaa erga konkolaataa ittiin imallu geejiba qabanneen booda haasaa waliin taasisaa turre. Miila kee si ilaalchisuun qaba naan jettee qarshii mataa keen na yaalsiftee gara qe’ee obboleessa kootti na gaggeessite. Kana booda hariiroon koo fi kee kanumaan eegaleem.
Ani mana barumsaa bultii kanan galeef amala ani qabu irraa ka’uun maatiin qarshii walitti buusee na barsiisaa ture. Mana barumsaa sana akka mana hidhaattan ilaalaa ture. Ergan si argadheen booda waggaa guutuu osoon achii bahuu baadhee jedhaan ture. Edaa namni gaariin haga kana nama jijjiiraam.
Yeroo jaalalaa bal’aa waliin dabarsine akka carraa ta’ee Yuunivarsiitii gara garaa nu gahe. Anis atis haasaan bilbilaan qofa ta’e. Akka durii morma jala wal suufuun bilbilaan ”Umphaa” jechuu qofa taateem.
Ayii baroota sana hunda yommuu waliin dabarsinu borii keenya malee har’aa keenya takkaa yaadnees haasofnes hin beeknu ture. Guyyaan torban dhalee,torban ji’a dhalee, Ji’is waggaa dhaluun anis atis barnoota keenya fixne eebbifamne.
Hojiillee wal duukaa arganne. Amma karoorri itti aanu fuudhaa fi heeruma keenya jennee kaaroorfanne. Ati garuu waan kanatti gaaf tokkollee gammadduu hin turre. Ani garuu naaf hin galu ture. Na jibbiten jedhaa ture. Ati edaa dhibee mataa kee kan na dhokfatte qabda ture. Ani yooman akkas sehe. Amala koo isuma beektu nan jarjaraam. Anatu si gaddisiisa malee atoo gaaf tokko hamtuun afaan keetii bahee hin beeku.
Yaa Giiftii jaalalaa koo fuudhaa fi heerumni keenya torban gaafa hafu ganama barii bilbila ani hin eegne gurrarraa natti iyye. Sagaleen bilbila kana hin kaasiin naan jedhu natti dhufaa ture. Ani garuu garaa jabaadheen kaase. Waanan dhaga’e amanu hin dandeenye. Abdii kootu dukkanaa’e. Guyyaatu halkan natti ta’e. Dhibee kee waggaa dheeraa jaalala anaaf qabdurraa kaatee gammachuu koo qofaaf jiraachaa turte.
Anis jala bultii cidha keenyaatti gara lamuu hin deebinettan si gaggeesse. Yoomuu taanaan si hin dagadhu. Akkuma ati jaalala koof jettee dhibee kee dhokfattee anaaf jiraachuun aarsaa taate anis namoota akka kee dhibee sanaan qabanii rakkatan maraaf gargaarsa gochuun hojjechuu irrattan argama. Gargaarsa gara garaas argadhee giddu gala cimaa tokko ijaaruufan jedha. Anaaf haati manaa yoomuu taanaan si qofaa dha. Siitiin booda eenyuunuu iji koo ilaalee hin beeku.
Sin jaaladha. Jaalalli kennuu malee fudhachuu akka hin taane na barsiiftee ofii kee dabarte. Mataa keef osoo hin jiraatiin anaaf jiraattee deemte. Nagaatti. Jaalallee kee fi Abbaa Manaa kee Gurmeessaa irraa. Jaalallee koo fi haadha manaa koo maqaan dhahuu hin barbaadneef…
Xalayaa koo kanas akka Sheeri naaf gootan kabajaa dhan isiin gaafadha!